डा. रमेशसिंह भण्डारीको ‘शब्द शल्यक्रिया’ – Health Post Nepal
डा. रमेशसिंह भण्डारीको ‘शब्द शल्यक्रिया’
२०७७ फागुन ४ गते ७:५५
डा. रमेशसिंह भण्डारी पेसाले स्वाथ्यकर्मी हुन्। उनी त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराज गञ्जका कलेजो प्रत्यारोपण सल्यचिकित्सक हुन्। डा. भण्डारीका औला विरामीको अप्रेसन र मलमपट्टीमा मात्र व्यस्त हुँदैनन्। उनका औला बेला–बेला गितारको तार र गीतका शब्दमा कुदिरहेका हुन्छन्।
केही समय पहिले डा. भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा रचित गीतमा स्वर भरेका थिए।
उनले भरखरै दोस्रो गीत ‘निलो आकाश’ बजारमा ल्याएका छन्। उनले एनिमेसनसहितको लिरिकल भिडियो बजारमा ल्याएका हुन्।
आफ्नै युट्युब च्यानलबाट डा. भण्डारीले गीत सार्वजनिक गरेका हुन्। गीतमा उनकै स्वर र शब्द रहेको छ।
फुर्वा गुरुङले एनिमेसन लिरिकल भिडियो तयार पारेको गीतमा संगीत संयोजन निरज डङ्गोलको रहेको छ।
कसरी फुर्छ डा. भण्डारीको सिर्जना
उनी सधै प्रफुलित मद्रामा हुन्छन्। सधै उत्साहित।
‘जीवन भनेकै एक उत्साह हो। सधै हासिखुशी रहनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘कामबाट फुर्सद हुँदा केही न केही रचनात्मक कुरा सोचिन्छ। त्यही बेला सिर्जना जन्मिने हो।’
गाडिमा गुडिरहँदा पनि उनी गीत र संगीतको धुनमा मोहित हुन्छन्।
डा. भण्डारी गीत मात्रै होइन खेलका पनि त्यत्तिकै सौखिन व्यक्ति हुन्। उनी बेला–बेला बचेको समय निकालेर साथिहरूसँग फुटबल खेल्दै रमाइरहेका हुन्छन्। अहिले भने कोरोनाले उनको त्यो कार्यमा थोरै बाधा पुगेको छ।
उनी आफूलाई त्यति धेरै बिजी राख्दैनन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालभन्दा अन्यत्र पनि काम गर्दैनन्। अस्पतालमा सेवा गरिसकेपछि बचेको समयलाई डा. भण्डारी सिर्जनात्मक बनाइरहेका हुन्छन्।
विरामीसँग सांगीतिक थेरापी
उनी आफूलाई न साहित्यकार भन्न रुचाउँछन् न गायक। गायन उनको रूची हो। सिर्जना कोर्नु मनमोभाव। उनी फुर्सदको समयमा आत्म सन्तुष्टिका लागि सिर्जना गरिहेका हुन्छन्।
उनी चिकित्सकको मन दह्रो हुनुपर्ने ठान्छन्। ‘साहित्यकार हुँदैमा मन कोमल हुन्छ भन्ने छैन। बरु इमोस्नल हुनसक्छ’, उनी भन्छन्।
उनी घर र साथिभाइको माझमा मात्रै गीत गुनगुनाउँदैनन्। अस्पतालमा बिरामीहरूलाई पनि गीत गायर मनोरञ्जन प्रदान गरिरहेका हुन्छन्।
गीतसँगै प्रदान गर्ने हौसलाले बिरामीहरू खुशी मिल्छ। कतिपय बिरामीमा त उनको त्यो बानी आत्मबल बढाउने थेरापी नै बन्छ। बिरामीले निको भएर घर जाँदा डा. भण्डारीको तारिफ गर्छन्। बिरामीले त्यसरी तारिफ गर्दा उनी पनि दंग पर्छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिर्जनामा स्वर दिइसकेपछि उनले राम्रो चर्चा पाए। त्यसले पनि यस क्षेत्रमा लाग्न थप प्रेरित ग-यो। उनी गायकै बन्छु भनेर सांगीतिक क्षेत्रमा लागेका होइनन्। तर, अभिरुचीले यस क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गरिरह्यो।
उनले कतै संगीत सिकोका छैनन्। कतै गायनको कक्षा पनि लिएका छैनन्। गीतप्रतिको रुचीले उनी गुनगुनाउँछन्। गुनगुनाउँदा गुनगुनाउँदै आफै सुर र ताल मिल्न थाल्यो। गीतार बजाउँदा बजाउँदै धुन मिल्न थाल्यो। र, उनी त्यसरी नै अगाडि बढिरहे। जसको प्रतिफल डा. भण्डारी दुई ओटा गीत बजारमा ल्याउन सफल भएका छन्।